HABABKA WAX KU OOLKA AH EE LOOLA DHAQMO EE KALLUUNKA CAGAARKA AH (CAARADA) - CANAB
Sidee loola tacaali karaa faashadda canabka
Bannaanka u badan oo jecel inay koraan canab on sirqoolladooda. Waxaa lagu qaddariyaa sifooyinka wanaagsan iyo dhadhanka aan dhammeysnayn.
Si kastaba ha noqotee, dalagga dalagga waxaa laga yaabaa inuu halis ku jiro haddii dhirta uu saameeyo cayayaanka. Inta badan caleemaha waxaa lagu soo weeraray cuncun, oo loo yaqaano cayayaanka canabka.
Markaad qaadsiinaysid, waxaad lumi kartaa ilaa 30% dalagga, iyo haddii aadan daaweynin waqtigaa daaweyn, waxaad lumin kartaa ilaa 50%.
In this article waxaan ka hadli doonaa tallaabooyinka si loola dagaallamo pruritus canab.
Cuncun canab: helitaanka inuu ogaado cadowga
Canaanku wuxuu dareemay pruritus waa nooca caarada. Jidhkiisu waa yar yahay, qaababka cylindrical, illaa 0.15 mm dherer. Caadi ahaan caarada waxay ku taalaa dhinaca hoose ee caleemaha.
Marka ay ciribtirto oo ku durto calyada, meeshan waxaa loo sameeyaa foosto cad oo marka hore ah caleen caleenta, ka dib markii caleemaha midabka casaanku ku yaal qulqulka, dhinaca dhinaca kale ee caleen waxaa jira tubercle.
Ma taqaanaa? Dareemida dareemiddu waa mid aan macquul aheyn in la tirtiro, ka duwan sida xagta buunshaha, sidaas darteed si fudud ayaad u aqoonsan kartaa hunguri dufan.
Dhirta caleemaha caleemaha canabku waxay helayaan midab madow-jaale ah waqtiga, iyo noocyada guduudan waxay leeyihiin midab guduudan. Haddii aad ku aragto midab huruud ah oo caleemo ah, tani macnaheedu waa in, marka lagu daro calaamadda, canabku waxay ku dhacdaa fayraska.
Darajo kasta oo geed ah ayaa laga yaabaa inay ka duwan tahay. Haddii weerarka shilku uu ku filan yahay, markaa dhibcaha caleemaha ku duugan, ka dibna way xiraan lafdhabarta.
Cilladda saxda ah waxay ku badan tahay caleemaha hoose iyo koritaanka fiican ee duurka. Cabbirka labaad ee shilinta wuxuu ku gudbin karaa caleemaha sare ee geedka canabka ah ee bartamaha xagaaga.
Haddii qoyaanka hawada sareeyo, dareemay caarada waxay ku dhufan kartaa rucub canab ah, ka dib markaa ay isku duubnaadaan oo ay noqdaan kuwo aan habooneyn.
Cimilada qallalan ee hawada kulul waxay sidoo kale gacan ka geystaa horumarinta degdegga ah ee shilinta.
Ma taqaanaa? Dabayl xoog leh ayaa sidoo kale gacan ka geysta fidinta shilinta.
Waxay yareeyaan sawirrada sawiraadeed ee caleemaha, iyadoo yaraynaysa dhalidda iyo tayada canab. Meelaha halkaa oo ay ku dhici karto maqaarka sabirta ah ee maqaarka. dillaacin geedka canabka ah, oo ka hooseeya miisaanka kelyaha ama hoosta jilifka, kaas oo uu kuusku daray. Guga, marka indhaha iyo caleemaha ubaxyada, cuncunku wuxuu bilaabmaa hawshiisa.
Grape Mite Harm
Cayayaanka sabiibka ah waxay ku baxaan dheecaan dhirta. Waqtigaan, wuxuu sii daayaa enzymes, sidaas darteed caleemaha waa la bedelay. Qeybta sare ee foomka unugyada caleenta ah waxaa ka mid ah dukaamada, tubercles. Bloom a iyo cirridka caddaanka ah ayaa ka muuqda hoos, halkaas oo cayayaanka canabka oo kora oo kobcaya. Goobta canabka ah ee canabkiina, waxsoosaarka warshaduna aad hoos ugu dhacayso, nidaamka xididka ayaa la yaabay.
Waa muhiim! Haddii aadan qaadan tallaabooyin lagula dagaallamo cayayaanku, dhirta way dhiman kartaa.
Iyada oo dhalmo badani, cayayaanka canabka ayaa si wayn u saameeya inta badan caleemaha, taas oo ka dhigaysa daaweyn dheeraad ah oo adag. Taas ka dib, korriinka caleen wuxuu istaagaa, sawiristaha hoos ayuu u dhacaa, qaybta cudurka qabta ee caleemaha qallajisa oo dhinto. Sidaa darteed, waa mid aad u muhiim ah in aan la bilaabin iyo ka hortagga saxaraha saxda ah ee dhirta waqti, sababtoo ah inta lagu guda jiro xilliga sii kordhaya ee pruritus wuxuu siinayaa ilaa 7 jiil.
Nidaamka beeraha ee caqliga
Haddii dhirtu ka soo baxdo caleemahaaga, ka dibna tallaabooyinka soo socota ee la dagaallanka waxaa lagu taliyaa:
Ha u oggolaanin geedka canabka ah inuu dhulka ku jiro, wuxuu kordhiyaa halista dhaawaca wuxuuna sii xumeynayaa daaweynta.
Haddii aan lagu guulaysan, qodo ciidda agagaarka canab. Tani waa in la sameeyaa guga iyo dayrta.
Gubo dhammaan qaybaha fog ee warshadda: jilif, caleenta sannadkii hore, jarjar geedka canabka ah.
Fiirinta shilinta waxaa inta badan ku yaal caleemaha hoose. Caleenta saameysa waa in si dhakhso ah looga saaraa si looga fogaado faafin dheeraad ah.
Isu diyaarinta cayayaanka canabka
Inkasta oo habab badan oo loo adeegsado qallafsan, ma fududa in gabi ahaanba laga takhaluso cayayaanku. HSi looga takhaluso cayayaanka isticmaal daawooyinka soo socda:
Daroogada "Dnok" waxaa loo isticmaalaa in lagu buufiyo canabkeeda xilliga gu'ga, ilaa ay burooyinkeeda ubxinayaan.
Xilliga dayrta, ka dib marka caleen dhacdo, baadiyaha waxaa si buuxda loo buufinayaa xal 5% oo ah maraq lime ah.
Xilliga xagaaga, acaricides iyo acaricides cayayaanka ayaa loo isticmaalaa in la dilo cayayaanka. Gaar ahaan wax ku ool ah muuqaalka muuqaalka kalluunka.
Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, daawooyinka waxaa loo isticmaalaa in lagula dagaallamo beertii "Apollo", "Omite", "Fozalon", "Talstar", "Pliktran", "Mitak", "Fosfamid", "Ortus" iyo kuwo kale.
Marka ugu horeysa ee koritaanka, marka caleemaha ay gaaraan 5 cm, kaniiniga colloidal ayaa loo isticmaalaa.
Waa muhiim! Marka lagu daro canab, xusuusnow in dhammaan diyaar garowga waa in lagu dabaqo qaybta hoose ee caleemaha, haddii kale saameyn ma yeelan doonto.
Inkasta oo daroogooyinka ay bixiyaan natiijo ballaadhan oo dheeraad ah, waxay waxtar u leeyihiin oo kaliya wadajirta hababka agronomiga ah, markaa waa inaadan iloobin iyaga. Dhibaatada ugu dambeysa ee saxda ah, daaweynta tayada ayaa ku filan, laakiin waxay qaadan kartaa dhowr.
Inta badan suugaanta waxaa lagula talinayaa in lagu ilaaliyo canabkiisa cuncunka iyadoo la adeegsanayo kiimikada kiimikada kiimikooyinka sunta ah. Laakiin waa in maskaxda lagu hayaa in maanta kalluunka faraha badani ay horey u sameeyeen difaac noocaas ah kiimikada, sidaas darteed waxtarkooda waa mid aad u hooseeya. Kordhinta qiyaasta waxay si xun u saameyneysaa ku habboonaanta dalagga iyo geedka guud ahaan.
Si loo yareeyo khatarta saxarada saxda ah, natiijooyinka wanaagsan waxay muujiyaan daaweyn ka hortag ah. Si loo dhammaystiro tallaabooyinka soo socda:
Daroogada "Neoron" waxay ku haboon tahay cuncun. Wax qabadka waxaa lagu sameeyaa waqti kulul. Bedel ahaan, waxaad isticmaali kartaa daroogada "Akarin."
Iska ilaali qadarka. Feejignaan yar ma lahaan doono saameynta la rabo, iyo xad-dhaaf - waxyeello.
Si sahlan, samee jadwal si aad u ogaato waqtiga dhabta ah ama hababka kale. Tani waxay qaadan doontaa wakhti, laakiin soo noqoshada dhirta ayaa kuugu mahad naqaya hadhuudhka deeqsinimada.